Kuuriyada Waqooyi oo Gantaal hawada Sare Ugantay
Home Somali News Kuuriyada Waqooyi oo Gantaal hawada Sare Ugantay
Doowlada Kuuriyada Waqooyi, ayaa Gantaal u Gantaal u riday hawada sare, Gantaalkan ayaa ka talaabay koofurta Biyaha dhow ee Philipines, waxaana ay kadhaga adeegtay digniintii Caalamka oo ahayd ineeysan tallaabadaas qaadin.
Fogaanta Gantaalkan ay gantay kuuriyada Waqooyi iyo waliba qadka uu ku socday ayaa waxa ay keeneeysaa su’aalo laxiriira inta ay korortay awooda Kuuriyada Waqooyi ee dhinaca Gantaalada ridada dhaadheer.
Gantaalkan kii kahoreeyay oo bishii Abril hawada loo ganay ayaa Kuuriyada Waqooyi ay ku guuldareesatay markii uu qarxay baddana uu kusoo dhacay.
Doowladaha Shiinaha, Ruushka, Mareeykanka ayaa intaba waxay Kuuriyada Waqooyi ugu baaqeen ineey joojiso Gantaalkan ay hawada udirtay oo ay tijaabadaasi hakiso, taas oo kasoo horjeesaneeysa xanibaadii gantaallada ridada dhaadher in latijaabiyo.
Kuuriyada Koofureed oo iyada bishaan soo socota qaban doonta doorashooyinka madaxtinimada wadankaasi ayaa waxay sheegtay in maamulka K.waqooyi ay qaadan doonaan masuuliyada waxa kasoo baxa ridida Gantaalkan ay kadhago adeegtay.